Akhriso magacyada iyo taariikhda waxbarashada xubnaha ku jiro Golaha dhaqaalaha qaranka
arlaadi August 12, 2018 1 Comment
Dhowaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wareegto kusoo saaray Golaha dhaqaalaha qaranka ayada oo maalintii shalayd ahayd ee Sabtida lagu daahfuray golahaasi magaalada Muqdisho.
Shan ka mid ah Golaha ayaa ah Soomaali halka afarta kalena ay ajaanib yihiin. Hadaba hoos ka akhriso magacyada iyo aqoonta xubnaha ka midka ahi Golahaan.
Waxaa qibrad u leeyaxay in shaqsiyaadka falanqeeyo .
Waxaa it’s waano ah shaqsiyaadka bankiga loo idmaday waa in noloshooda la baaraa waxaa hubaal ah in qaarkood at KU yimaadeen shaqsiyaadka is soo shaqeyay kana faidestay dowlad la’anta , ok na donayaan in at KU soo noqdaan iyagoo adegsanaya shaqsiyaadka bankiga
Loo soo doorway.
Aniga waxaa Hindu axayn ma KU aamini laxayn maaliyada Somalia xilligaan inta ay Soomaalida ay is diyaarinayaan mustaqbalka.
Was billahi towfiiq